बालकृष्ण ढुङ्गेलकी छोरीको प्रश्न : मेरो बुवा जेल बस्नुपर्ने, अरु छाती चौडा गरेर घुम्ने ? (भिडियोसहित) | Ratopati
बालकृष्ण ढुङ्गेलकी छोरीको प्रश्न : मेरो बुवा जेल बस्नुपर्ने, अरु छाती चौडा गरेर घुम्ने ? (भिडियोसहित)
personकृष्ण गिरी exploreकाठमाडौं access_timeचैत ८, २०७४ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । राजधानीको बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेस ।
बिहीबार जेल जीवन बिताइरहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलले लेखेको गीति एल्बम विमोचन हुँदै थियो ।
मञ्चमा कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेकी थिइन्, ढुङ्गेलकी जेठी छोरी विनिता ढुङ्गेलले ।
विनिताको छेवैमा बसेका थिए– कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय गीतका रचनाकार ब्याकुल माइला । उनीसँगै बसेकी थिइन् जनयुद्धका क्रममा मारिएका रितबहादुर खड्काकी आमा मनमाया खड्का ।
खड्कासँग बसेका थिए–माओवादीका नेता राम कार्की ।
जब बिनिताले कार्यक्रममा उपस्थित सहभागिहरुलाई स्वागत गर्न आफ्ना भनाई राख्न थालिन् – पूरै हल नै स्तब्ध बन्यो ।
आमाले हामीलाई सम्झाउँथिन् – माओवादी हुनुभएको छ । कुनै दिन आउनुहुन्छ’
तर, हामीले बुबाको खोजी गरिरहयौँ । बुबा आउनु भएन ।
आमाले एक दिन म र बहिनीलाई दुई–तीन वटा फोटा देखाउँदै भनिन् – ‘यिनै हुन् तिम्रा बुबा । नाक, मुख र आँखा तिमी दुईकै जस्ता छन् ।’ पहिलो चोटी बुबालाई फोटामा देख्यौ । कहिलेकाँही त्यहि फोटो हेरेर बुबाको सम्झना पूरा गर्दथ्यौ ।
घरमा सेना र प्रहरीले खानतलासी गर्ने काम सधँैजस्तो गथ्र्यो । आमाले बुबाको फोटा घर पछाडी खाल्डो खनेर लुकाएकी थिइन् । एकदिन त्यो पनि सेनाले थाहा पाएर खाल्डो उधिनेर फोटो नै लग्यो ।
विनिताले थप भावुक हुँदै थपिन् ‘समय बित्दै गयो, हामीलाई गाउँमा बस्न समस्या हुदै जान थाल्यो । यो बझपछि बुबाले हामीलाई काठमाडौ आउन भन्नुभयो । तर यहाँ पनि सहज भएन, हाम्रो जीवन ।
आमा ज्यामी काम गर्न थाल्नुभयो । म र बहिनी इन्दिरा रानामगरले सञ्चालन गरेको अनाथालयमा बस्न थाल्यौ ।
जब म १२ कक्षाको परीक्षा दिएर गाउँ गए–त्यसपछि थाहा पाएँ मेरो बुबाले गरेको कामको बारेमा । ढाँडेमा गाडिले हर्न बजाउँदा मेरो बुबा बोले झै लाग्थ्यो । त्यो सडक मेरो बुबाको पहलमा खनिएको हो । आज कच्ची भएपनि गाडि गाउँ घर पुगेको छ ।
यति भन्दै गर्दा उनी कुनै नेताजस्तै लाग्थ्यो । उनमा यति आत्मविश्वास थियो कि उनी जेलमा बसेको बुबाकी छोरी होइन, कुनै राजनीतिशास्त्रका व्याख्याता ।
‘बुबाको अवस्था नाजुक छ । एउटा मृगौलाले काम गर्दैन । अर्को मृगौलाले २५ प्रतिशतमात्र काम गर्छ’ भावुक हुँदै विनिताले सुनाइन् ।